Igwe anaghị eme nchara - Chinalọọrụ igwe anaghị agba nchara - China anaghị enweta nchara igwe nzụ
Igwe anaghị adị nchara Ferrule Mesh
Black Oxide USB Mesh
Mpempe mgbochi Mbelata Mpepu
Mbelata Nkwado Na-akụ
Ihuenyo Mesh gbasawanyere
USB Cable Rod
Ngwọta alchọ Mma
Metal Coal Drapery
Eserese Chain ihu
Ngwa na hazie ya
Ngwọta Atụrụ akpaaka
Black Oxide igwe anaghị agba nchara igwe
A na-eji eriri eriri igwe anaghị emepụta nchara ikuku oxygen dị na eriri igwe anaghị agba nchara, ihe gụnyere AISI304, AISI316 na AISI316L; Enwere ike ịhazi akwa igwe ojii dị mma iji mee ka ọ dị mma maka ịme ọhụụ gị, ngwa agha ma ọ bụ ngwa ụlọ; Enwere ike ịhazi ụdị Diagonal na oge adịghị mma.
Igwe anaghị eji igwe anaghị acha nchara eriri igwe (Inter-kpara)
A na-ewepụta ngwaahịa igwe anaghị agba nchara nke igwe anaghị agba n’usoro abụọ: Inter-woven na rudị Ferrule. A na-eji akwa akwara ji akwa akwa mere. Constructiondọ ụdọ ahụ bụ 7 x 7 ma ọ bụ 7 x 19 mere site na AISI 304 ma ọ bụ AISI 316 otu ihe. Ngwunye a nwere ike ikike agha, ikike mgbanwe dị elu, nghọta na elu span.The ss USB ntupu nwere uru na-enweghị atụ ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ dị n'ọtụtụ dịka ịkpa ike, nchekwa, ihe ịchọ mma na ịdịte ya wdg. ndị na-ese ụlọ na ndị na-ese ụkpụrụ ụwa niile.
Mgbanwe igwe anaghị agba nchara igwe eji agba agba (ụdị ferrule)
A na-eji eriri sswire igwe anaghị arụ nchara igwe anaghị arụ ọrụ dịka SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L wdg na ụzọ abụọ eji arụ ọrụ: 7 * 7 na 7 * 19. eriri dia1mm-4mm na nha nha: 20mm-160mm. E kesara ụdị nke ferrule n'ụdị nchara alloy, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa tinned na Nickled braesh site na ihe nke ferrule. A na-ejikarị ụdị ferrule dị n'ọhịa dịka balustrades na àkwà mmiri na steepụ ụlọ, nnukwu ogige mgbochi, na iji usoro trellis facade. Dịka ngwaahịa na-apụta na ihe eji achọ mma na nchedo, eriri igwe anaghị agba nchara enyerela mordern ime ụlọ ihe eji achọ mma na ọrụ ọfụma, nke na-enwetakwu ekele site n’aka ndị nrụpụta na ndị ahịa n’ụwa niile.
Mpempe na-agbanwe agbanwe maka ihe eji achọ mma, anyị nwere akwa ntanetị nke ọla, agbatị gbatịrị agbatị, njikọ njikọ ọla eji eme ihe na ihu ihu, wdg.
Mgbakwunye Irin Architectual Woesh Mesh
Typedị Mpempe Mpempe igwe anaghị agba nchara
Nwa nkuzi ojii
Nkwado nkwado anyị dị 24 awa kwa ụbọchị: 008615832151814
Mọnde-Fraịdee: 9am ruo elekere ise nke mgbede
Saturdaybọchị Satọde: 10am ruo elekere anọ nke mgbede